Atleta niofana tany Sina: tafaverina, omaly, ny ampahany voalohany | NewsMada
Atleta niofana tany Sina: tafaverina, omaly, ny ampahany voalohany
Tafaverina an-tanindrazana, ny asabotsy lasa teo, ny ampahany voalohany amin’ireo atleta sy ireo mpanazatra, nanaraka fiofanana, tany Sina. Nahatratra 21 izy ireo no tonga, notarihin’ny filohan’ny delegasiona, i Jaosoa Emmanuel. Mpilalao badminton ny 18 ary mpanazatra ny roa. Noraisin’ny talen’ny kabinetran’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena, Andrianaivonirina Anny, sy Rabibisoa Anselme, tale jeneraly, ary ny sekretera jeneralin’ny federasiona malagasin’ny badminton izy ireo. «Eo hatrany ny minisitera, manohana ny fanatanjahantena malagasy. Tsy mikely soroka ny ezaka amin’ny fanampiana ny atleta, hanatsara ny zava-bitany, eo amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena, hatrehiny», hoy Andrianaivonirina Anny.
Tonga nitsena ireo atleta teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ireo raiamandrenin’ny atleta, nisaotra ny minisiteran’ny Fanatanjahantena sy ny governemanta sinoa, ka nahafahan’ireo zanany niatrika ny fiofanana, tany Sina nandritra ny enim-bolana. «Nizotra tsara ny fiofanana. Mendrika ny Malagasy tamin’ireo firenena miisa enina nahazo ity fiofanana ity, teo amin’ny lafiny teknika sy ny fitondrantenan’ny atleta», araka ny nambaran’ny filohan’ny delegasiona.
Marihina fa firenena afrikanina voalohany nahazo ity fiofanana ity i Madagasikara. Niofana nandritra ny 120 andro tany Sina ireo atleta, teo ambany fitarihan’ireo manampahaizana sinoa. Ho tonga, rahampitso talata, ny tenisy ambony latabatra miisa 16, sy ny mpanazatra anankiroa. Ny alakamisy ny atletisma sy ny taranja lomano ary ny asabotsy kosa ny fibatana fonjamby izay misy atleta 18 avy sy mpanazatra roa avy ihany koa.